जब आलियाले रणवीरलाई अवार्ड समारोहमा किस गरिन ! भिडीयो बन्यो भाइल – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsBollywoodजब आलियाले रणवीरलाई अवार्ड समारोहमा किस गरिन ! भिडीयो बन्यो भाइल
जब आलियाले रणवीरलाई अवार्ड समारोहमा किस गरिन ! भिडीयो बन्यो भाइल
March 25, 2019 Tulasa Karki Bollywood, News 0
भखरैमात्र बलिउड फिल्म फियर अवार्ड २०१९ सम्पन्न भएको छ । हिजोमात्र सम्पन्न सो अवार्ड कार्यक्रममा अभिनेता रणवीर कपूरले बेस्ट एक्ट र आलिया भट्टले बेस्ट एक्टर्सको अवार्ड प्राप्त गरेका छन् ।
रणवीरले फिल्म सन्जु र आलियाले फिल्म राजीबाट सो अवार्ड प्राप्त गरेका हुन् । अवार्ड कार्यक्रम आलियाले रणवीरलाई आइ लभ यू भन्दै किस समेत गरेकी थिन । जुन देखेर रणवीरकी आमा पनि निकै खूशी भएकी थिन ।
साथै रणवीरकी आमाले सो खुशी सामाजिक संजालमा समेत शेयर गरेकी छिन । उनले सामाजिक संजालमा रणवीर र आलियाले हातमा अवार्ड बोकेको फोटो शेयर गर्दै खुशी व्यक्त गरेकी छिन । उनि यी दुईको सम्बन्धलाई लिईएर निकै खुशी छिन ।
सलमानको ‘भारत’ ट्रेलर रिलिज डेट तय
दिपिकाको बायोपिक फिल्म’छपाक’को फस्टलुक सार्वजनिक